Semalt बाट T सल्लाहहरू कसरी लिने लि Links्कहरू दाता साइटहरू छनौट गर्ने बारे सल्लाह
पहिले, खोज ईन्जिनहरूले साइटहरूलाई अत्यधिक महत्त्व दियो जुन बाह्य लिंकहरूको ठूलो संख्यामा चालित थियो। ती दिनहरूमा, एसईओ विशेषज्ञहरू र साइट मालिकहरूले एक्सचेन्जहरूमा लि buying्कहरू खरीद गरेर डाइरेक्टरीहरू मार्फत संसाधनको प्रबर्धन गरे र उनीहरूलाई कुन दाता राख्ने भनेर खासै मतलब गरेन। धेरै समय बितिसकेको छ, खोज इञ्जिनहरू चलाख र अधिक समझदार भएको छ, र एसईओ-पदोन्नति एक वास्तविक खरीदमा ब्यानेल खरीदबाट बदलिएको छ जसको लागि ज्ञान, अनुभव, धैर्य, र पेशेवर अन्तर्ज्ञान चाहिन्छ।
स्मार्ट नयाँ एल्गोरिदमले दाताहरूको जटिल विश्लेषण गर्न सिकेका छन्, र तिनीहरूको संख्याहरू मात्र गणना गर्दैन। त्यसकारण, एक एसईओ विशेषज्ञ वा एक वेबसाइट मालिक को लागी जो एक संसाधनको लिंक मास निर्माण गर्न को लागी काम गर्दैछ, सब भन्दा जरुरी प्रश्न भनेको लि how्क किन्नको लागि दाता छनौट गर्नु कसरी हुन्छ जुन सर्च इन्जिनले सराहना गर्नेछ, र बन्ने छैन। प्रतिबन्ध अन्तर्गत पतन को एक कारण।
बाहिरी लि link्कको मूल्य उच्च छ साइटमा अग्रसर हुने, राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिईन्छ, जसको मतलबः
खोज परिणामहरूमा पदोन्नति र स्थितिको सकारात्मक प्रभाव
ट्राफिक बढाउन मद्दत गर्दै
साइटमा नयाँ लक्षित प्रयोगकर्ताहरूको आकर्षण
लक्षित कार्यहरूको संख्या (बजार, न्यूजलेटर सदस्यता, पोष्ट, आदि) को बढावाको प्रचार।
प्रयोगकर्ता वफादारी मा वृद्धि
जब लिंकले तपाईंलाई माथिका सबै प्राप्त गर्न अनुमति दिँदछ, अवस्था उत्तम छ। अन्यथा, तपाईं माध्यमिक परिणाम हुनेछ र सबैभन्दा खराब मा, तपाईंको साइट जुर्माना अन्तर्गत पर्नेछ।
यस बोझबाट बच्न, हामी तपाईंलाई यो विकल्प एक लाई सुम्पन सल्लाह दिन्छौं व्यावसायिक एजेन्सी जस्तो Semalt आजकल लि buying्कहरू किनबेच गर्ने बिक्रीको महत्त्वका कारण। यो लेख को माध्यम बाट, हामी लिंक को एक्सचेन्ज प्रक्रियाको बेला खातामा लिनको लागि तपाईलाई मापदण्डहरु देखाउन कोशिश गर्ने छौं।
SEO मा दाता साइटहरू के हुन् र तिनीहरूलाई किन आवश्यक छ?
दाता साइटहरू वेब स्रोतहरू हुन् जुन साइट-स्वीकारकर्ताहरू (जुन तिनीहरू हुन्) लि receiving्क मासमा प्रसारण गर्दछन्: अन्य वेब स्रोतहरूको पृष्ठहरूमा लिंकहरू यसमा राखिन्छन्।
दाता साइटहरूले तपाईंलाई तपाईंको साइटमा स्वीकृत साइटहरूमा लिंक पोष्ट गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि उत्तरार्द्धले लि .्क द्रव्यमान बढाउँदछ, जुन एसईओको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ठूला र उत्तम लि mass्क द्रव्यमानहरू, यसको विश्वास उच्च हुन्छ (खोज इञ्जिनहरूको विश्वासको स्तर) र सम्बन्धित प्रश्नहरूको लागि परिणामहरूको शीर्षमा हुने सम्भावना।
लिंक निर्माण र यसको निर्माणको सिद्धान्तहरू
प्राकृतिक बाह्य सन्दर्भ जनको कार्य क्षमतालाई भनिन्छ लिंकबिल्डिंगम। यो बाह्य SEO पदोन्नतीको एक अंश हो।
लि building्क निर्माणको लागि साइटको विश्वास बढाउन, र खोज इञ्जिनबाट प्रतिबन्धित हुनको लागि, तपाईंले निम्न सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ:
निरन्तरता: नियमित कार्य spasmodic भन्दा बढी विश्वसनीय छ।
विविधता: बाह्य लिंकहरू दाता साइटहरूबाट मात्र होइन विभिन्न तरिकाले प्राप्त गर्न सकिन्छ।
व्यक्तिहरूको लागि लाभ: लि and्कहरू र दाताहरू यस्तो तरिकाले चयन गर्नुहोस् कि यो प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगी छ र उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिले रूचि छ, न कि खोज बोटहरू।
छनौट मापदण्ड: कसरी राम्रो लि link्क दाता छनौट गर्ने?
दाता जाँच सुरु गर्नु अघि, यो संसाधनको विशेषताहरूको चेकलिस्ट कम्पाइल गर्नु उचित हो, जसले तपाईंको आफ्नै साइटमा लिंक राख्नको लागि राम्रो प्लेटफर्मको संकेतहरू समावेश गर्दछ।
लि pla्क राख्नका लागि उपयुक्त दाता साइट खोज्न धेरै समय लिनेछ किनकि धेरैजसो साइटहरू जुन पहिलो नजरमा उपयुक्त देखिन्छ प्रमाणिकरणको अर्को चरणमा हटाइनेछ।
दाता साइटले पूरा गर्नै पर्ने प्यारामिटरहरूको विश्लेषण गरौं।
उही वा सम्बन्धित विषय
सन्दर्भ वेब स्रोतको विषय प्रापकको विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ। र उत्तम "सम्पर्कको पोइन्टहरू"।
अवश्य पनि, यहाँ १००% हिट ग्यारेन्टी छैन। तसर्थ, यदि कुनै प्रत्यक्ष जडान छैन भने, तपाईंले कमसेकम एक अप्रत्यक्ष भएको ठाउँमा काम गर्न आवश्यक छ।
प्रत्यक्ष संचार तब हुन्छ जब दाता र स्वीकारकर्ता साइटहरू गतिविधिको समान क्षेत्रको कम्पनीहरूको हुन्: उदाहरणका लागि, तिनीहरू बढ्छन र फलहरू बिक्री गर्दछ।
एक अप्रत्यक्ष जडान भनेको जब प्रसारण गर्ने वेब स्रोत र प्राप्तकर्ताको बिषयको बीचमा केहि थप पोइन्टहरू कोर्न आवश्यक पर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि हामी फल फलाउँछौं र बेच्छौं भने यसको अर्थ यसको स that्गठनहरू जसका संगठनहरूले फलफूलहरू चाहिन्छ काम गर्दछन् अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई दाताका रूपमा सुहाउछ। उदाहरण को लागी, मिठाई, खानपान, जाम को उत्पादन, र कमफेरिज।
किन तपाईं यो सूचक बेवास्ता गर्नुहुन्न? प्रत्येक साइटको आफ्नै लक्षित दर्शकहरू छन्, जुन ट्राफिक र रूपान्तरण ल्याउँदछ। साइकल पार्टका बारे लेख पढ्ने प्रयोगकर्तालाई फल आपूर्तिकर्ताको वेबसाइटमा लिंक देख्न अनौठो लाग्नेछ, उसले यसलाई पछ्याउँदैन र केहि पनि खरीद गर्दैन। यसका साथै, खोज बोटहरूले पनि शीर्षकहरूमा प्रासंगिकताको विश्लेषण गर्न सक्छ र त्यसो गरेकोमा प्रशंसाको सम्भावना हुँदैन।
तपाइँ उही क्षेत्र मा प्रचार
प्राथमिकता भनेको सम्भव भएसम्म प्रचारको क्षेत्रका साथ दाताहरू छनौट गर्नु हो।
यो राम्रो छ जब साइटसँग आक्रामक ब्यानर विज्ञापन छैन कि सामग्री अवलोकन गर्नका साथ हस्तक्षेप गर्दछ। तर सामान्यतया, विज्ञापन यस्तो चीज होईन जुन पटक्कै हुदैन: यो उपयोगी हुन सक्छ यदि साइट मालिकले केवल ती प्रस्तावहरू स्वीकार गर्दछ जुन उसको साइटको लक्षित दर्शकहरूको लागि उपयुक्त छ।
त्यसकारण, यदि कुनै वेब स्रोतमा विज्ञापन छ भने, यसको सामग्रीको मूल्याate्कन गर्नुहोस्: यो निषिद्ध सामग्रीमा लागू हुँदैन। यी सम्बन्धित उत्पादनहरू वा सेवाहरूको प्रस्तावहरू हुन् जुन यो वेब स्रोतको प्रयोगकर्ताहरूको लागि रूचि हुन सक्छ। अन्यथा, यो साइटमा तपाईंको लिंक पोष्ट गर्न अस्वीकार गर्नु राम्रो हो।
कार्यात्मक साइटहरू छनौट गर्नुहोस्
यो केवल ती दाता साइटहरूलाई ध्यान दिएर लायक छ जुन उच्च-गुणवत्ताको अनौंठो सामग्री पोस्ट गर्दछ र नियमित जानकारी अपडेट गर्दछ जुन सक्रिय रूपमा छलफल गरिएको र पर्यटकहरूले टिप्पणी गरेको छ। थप लाभ भनेको सामाजिक नेटवर्कमा समूहहरूको उपस्थिति, टिप्पणी प्रणालीको उपयोग हो।
साइटहरू छोड्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताहरूको ख्याल गर्दैन, उपयोगी र चाखलाग्दो हुन कोशिस नगर्नुहोस्, प्रबर्धन गर्न र अनुकूलन गर्न प्रयास नगर्नुहोस्। थोरै चासो पनि माइक्रोसाइटहरू हुन्, जसमा केवल केही लेखहरू हुन्छन् र त्यसपछि अन्य स्रोतहरूमा लिंकहरू हुन्छन्। यसमा पोष्ट गरिएको लिंकको मूल्य सामान्यतया यसको मान भन्दा धेरै बढी हुन्छ।
तपाईं विशेष सेवाहरू प्रयोग गरेर कसैको साइटको उपस्थिति जाँच गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै समानवेब, सेमरस, र अन्य। ट्राफिक जति उच्च छ दाताका लागि जति राम्रो छ।
दाता प्रतिबन्ध वा खोज ईन्जिन फिल्टर अन्तर्गत हुनुहुन्न। साइट जाँच गर्न, तपाईं अनलाइन सेवाहरू जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ Semalt।
साइट खोजी ईन्जिनले अनुक्रमित छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्
गुगल र यान्डेक्सको अनुक्रमणिकामा पृष्ठहरूको संख्या जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ साईटमा अवस्थित भन्दा कम स्पष्ट रूपमा छन्, वा यो सूचकांकमा केही पनि छैन भने, त्यसोभए तपाईंले त्यसमा लिंक पोष्ट गर्न अस्वीकार गर्नु पर्छ। अस्वीकृतिको लागि अर्को संकेत भनेको Google र Yandex मा अनुक्रमणिका पृष्ठहरू बीचको ठूलो भिन्नता हो।
एक इन्टरफेसको साथ साइटहरू जुन ब्यानर विज्ञापनको साथ स्प्याम हुँदैन
विज्ञापनले साइट मालिकलाई पैसा कमाउन अनुमति दिन्छ र सहि दृष्टिकोणले संसाधनमा मूल्य थप गर्दछ। त्यसोभए, सम्बन्धित उत्पादनहरूको विज्ञापन आगन्तुकहरूको लागि धेरै उपयोगी हुन सक्छ, र यदि मालिकले उसको साइटमा विज्ञापन गरिएको कुरा पनि जाँच्दछ भने, तब पाठकहरूले दोहोरो फाइदा पाउँछन्। यदि स्रोत विभिन्न सामानहरूका विज्ञापनहरू सहित पूर्ण छ, जसले सबै सामग्रीलाई ओभरल्याप गर्दछ र शंकास्पद वा निषेधित साइटहरू निम्त्याउँछ भने हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं बाह्य लि place्क राख्न प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुहोस्।
साइट को उमेर
फेरी, सूचकहरूलाई एक जटिलमा जाँच गर्न आवश्यक छ: यदि दाता जवान छ तर पहिले नै राम्रो उपस्थिति छ भने, त्यसोभए किन लिंक मा खरीद गर्ने छैन। तर यदि स्रोत धेरै महिना पुरानो छ तर कम यातायात र आउने लिंकहरूको सानो संख्या छ भने, त्यसोभए प्लेसमेन्ट अस्वीकार गर्नु राम्रो हुन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगी छ, र पैसा बनाउनको लागि पूर्ण रूपमा अवस्थित छैन
उत्तम साइटहरू, दाता सहित, मुख्य रूपमा प्रयोगकर्ताहरूको लागि सिर्जना गरिन्छ, र तेस्रो-पार्टी लिंकहरू राखेर पैसा कमाउँदैनन्।
यो सूचक आगमन र बाहिर जाने लिंकहरूको संख्याको तुलना द्वारा राम्रोसँग चिह्नित गरिएको छ। विश्लेषणको लागि, तपाईं विभिन्न अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि अहरेफ्स, सर्पस्ट्याट, वा एक पेशेवर सेवा प्रयोग गर्नुहोस् जस्तै Semalt। उपयुक्त साइटमा आउने लिंकहरूको यसको संख्या लगभग बराबर वा बाहिर जानेहरू भन्दा बढि हुनुपर्दछ। लिंक द्रव्यमानको विकासको गतिशीलतामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ताकि कुनै तीब्र उफ्रिहरू नहोस्।
खरीद निर्णयलाई असर गर्ने थप महत्त्वपूर्ण प्यारामिटरहरू
नामित प्यारामिटरहरू बाहेक, यो दाता साइटको चेक गरिएको पृष्ठको रेटिंग सूचकहरूलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। सब भन्दा महत्वपूर्ण सूचकहरु हामीलाई दाता गुणवत्ता मूल्यांकन को एक विचार दिन्छ।
लि don्क दाताहरूको एक सामान्य SEO विश्लेषण अनावश्यक हुनेछैन, जुन अनलाइन प्रयोग गरेर प्रदर्शन गर्न सकिन्छ विश्लेषक सेवाहरु जस्तै Semalt। उच्च लोडिंग गति, शीर्षक, वर्णन मेटा ट्यागहरू, शीर्षक र उपशीर्षकहरूको उपस्थिति, र उच्च-गुणवत्ता अनुकूलनको अन्य संकेतहरूले तपाईंलाई उत्तम छनौट गर्न मद्दत गर्दछ।
लिंकहरू राख्नको लागि 1०१ को सट्टा २०० को प्रतिक्रिया कोडको साथ पृष्ठहरू छनौट गर्नुहोस्। पछिल्लो दाता मान्न सकिन्छ, तर केवल एक फलब्याकको रूपमा।
लिंक प्लेसमेन्टको लागि प्रदान गरिएको नेस्टि of स्तर पनि समान महत्त्वको छ। लि with्कको साथ लेख मुख्यसँग नजिक छ र तपाईंको सामग्री उच्च छ, यो राम्रो हुनेछ।
लिंक खरीद गर्न दाताहरू कसरी छनौट गर्ने: विश्वसनीयता बनाम सरलता
वास्तवमा, यो प्रत्येक दाता साइटको "म्यानुअल" जाँच हो। यो विधि हामीले साइट मालिकहरू र तिनीहरूको घर-भित्रका SEO विशेषज्ञहरूको लागि सिफारिस गर्छौं जसले एक वा अधिक परियोजनाहरू प्रबन्ध गर्छन्।
लि of्कको दातालाई म्यानुअल रूपमा जाँच गर्नका लागि, हामी एक गुगल वा आवेदकहरूको एक्सेल स्प्रेडशीट कोर्दछौं र माथिको चेकलिस्टको आधारमा तिनीहरूको गुणवत्ता मार्क गर्दछौं। छनौट सुरू गर्न, हामी थिमेटिक सम्बन्धित साइटहरू खोजीमार्फत खोज्छौं र विस्तृत विश्लेषण सुरु गर्दछौं।
मैन्युअल रूपमा साइट खोजीको लागि, लिंकहरू राख्ने प्रक्रिया लामो छ, तर यसको मद्दतले तपाईं प्रभावशाली परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ: लक्षित दर्शकहरूमा प्राकृतिक वृद्धि प्राप्त गर्नुहोस्, ग्राहकहरू र ग्राहकहरूको संख्या बढाउनुहोस्, र तपाईंको सुधार गर्नुहोस् खोज परिणाममा स्थिति।
लिंक दाता चयन गर्ने प्रक्रियाको स्वचालन
हुनसक्छ यस प्रकारको प्रक्रिया छ, एक दाता छिटो छान्ने सब भन्दा सजिलो र सबैभन्दा साधारण तरीका। तर यसलाई सबैभन्दा भरपर्दो भन्न सकिदैन। लिंकको गुणस्तरको लागि, नतिजामा रुचि राख्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुँदैन, तर कार्यक्रम जसले साइटहरूको सम्पूर्ण द्रव्यमानलाई क्रमबद्ध गर्दछ जसले इच्छुकहरूलाई भुक्तान लिंक प्रदान गर्दछ।
सबै भन्दा लोकप्रिय आदानप्रदान स्वतन्त्र रूपमा दाता साइटहरू विश्लेषण र शंकास्पद संसाधनहरू त्याग्नुहोस्। एकै साथ, तपाईं कहिले पनि १००% निश्चित हुन सक्नुहुन्न कि प्रोग्राम चेक फिल्टर ईमान्दारीपूर्वक काम गर्दछ, त्यसैले पैसा खेर फाल्ने वा खोज इन्जिन प्रतिबन्धहरूमा पर्ने पनी जोखिम अझ बाँकी छ।
कम्तिमा सैद्धान्तिक रूपमा सम्भावित जोखिमहरूलाई कम गर्न, हामी तपाईंलाई केवल साइटहरू छनौट गर्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने प्रमाणित र दीर्घ-स्थायी लिंक एक्सचेन्जहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं। उदाहरण को लागी, Semalt दाता साइटहरू फिल्टर गर्नका लागि प्यारामिटरहरूको एक विस्तृत विस्तृत सूची प्रस्ताव गर्दछ, दिइएको अवसरलाई बेवास्ता नगर्न र एक स्रोतको छनौटमा कडा प्रतिबन्धहरू सेट नगर्न सल्लाह दिइन्छ।
हामी इमानदारीता र कामको लागि इमान्दार दृष्टिकोणको लागि खडा हुन्छौं, त्यसकारण, जब पनि न्यूनतम अवसर हुन्छ, हामी सावधानीपूर्वक जाँच गर्न सुझाव दिन्छौं। लिंक दाता छनौट गर्नका लागि एक स्वचालित विधि छनौट गर्नुहोस् र प्रस्तावित साइटहरूको अतिरिक्त आत्म-जाँच गर्न अल्छी नहुनुहोस्।
लि you्कहरू किन्नको लागि दाता रोज्ने उत्तम तरिकामा तपाईंले पहिले नै निर्णय गरिसक्नुभएको छ, र कुन विधि तपाईं आफ्नो वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्न चाहानुहुन्छ?
यदि तपाइँसँग अझै शंका छ भने, म तपाइँलाई खोज्न आमन्त्रित गर्दछु Semalt सेवा : एक पेशेवर सेवा जसले सबै मा एक प्रदान गर्दछ।
अन्तमा, हामी यो नोट गर्दछौं कि यी सबै प्यारामिटरहरू संयोजनमा काम गर्दछन्। त्यो हो, यदि साइट केवल सात बिन्दु मध्ये एकका लागि उपयुक्त छ, भने यो अझै तपाइँको दाता होइन। यसबाहेक, यदि वेब स्रोत सबै प्यारामिटरहरूमा उपयुक्त छ, शीर्षक र उपस्थिति बाहेक, यसलाई छोड्नु पनि राम्रो हुन्छ: शीर्षक र ट्राफिक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चयन मापदण्ड हो, र जब तपाईं साइट छनौट गर्नुहुन्छ, प्राथमिकता हुनुपर्दछ यी पक्षहरुमा राख्नु।